Ipa zita rekuti Hodges Hawk Mascot »Hodges University
Ipa zita Iyo Hodges Hawk Mascot!
Tinoda Rubatsiro Rwako!
Isu tine Hodges Hawk seye mascot edu, asi Hawk yedu inoda zita.
Makwikwi aya akavhurwa kune ese Hodges University fakaroti, vashandi, vadzidzi, alumni, uye nharaunda yakatowanda. Tumira tsamba yako yekutumira ku: Marketing@hodges.edu. Sanganisira rako rekutanga uye rekupedzisira zita, email kero, uye rimwe zita reHawk.
Mitemo Yepamutemo uye Ruzivo
HAPANA KUTENGA KUNOFANIRA KUPINDA KANA KUKUNDA. KUTENGA KUSI KUWEDZESA MIKANA YOKUKUNDA.
kukodzera: Makwikwi aya akavhurwa chete kuHodges University fakaroti, vashandi, vadzidzi uye alumni. Makwikwi aya anongovhurirwa vagari vepamutemo vemuUnited States, uye anoshaiwa panorambidzwa nemutemo. Makwikwi acho ari pasi pemitemo yese yemubatanidzwa, yenyika, uye yemunharaunda nemirau. Void panorambidzwa.
Chibvumirano cheMitemo: Nekutora chikamu, Mukwikwidzi ("Iwe") anobvuma kusungwa zvakazara zvisina mutsindo neMitemo iyi, uye Iwe unomiririra uye unopa mvumo yekuti Iwe usangane nezvinodiwa zvekukodzera. Uye zvakare, Iwe unobvuma kugamuchira zvisarudzo zveHodges University seyokupedzisira uye inosunga sezvo ichienderana nezviri mukati memakwikwi aya.
Nguva Yemakwikwi: Mapindiro achagamuchirwa kutanga neChipiri, Gunyana 15, 2020 na7: 00 am EST uye kupera neChitatu, Gunyana 30 na11: 59 pm EST. Zvese zvinyorwa zvinofanirwa kugamuchirwa neChitatu, Gunyana 30, 2020 pa11: 59 pm EST neemail ku: Marketing@hodges.edu.
Nzira Yokupinda Sei: Iyo yekupinda inofanirwa kuzadzisa zvese zvemakwikwi zvinodiwa, sezvakatsanangurwa, kuve vanokodzera kuhwina mubairo. Mapindiro asina kukwana kana asingaite maererano nemitemo kana zvirevo anogona kunge asina kukodzera pahungwaru hwega Hodges University. Iwe unogona kupinda kamwe chete, uchipa zita raunofunga kuti Hodges University Hawk inofanirwa kuve nayo. Iwe haugone kupinda zvakapetwa kupfuura zvinoratidzwa nekushandisa akawanda maemail adhi, kuzivikanwa, kana zvishandiso mukuyedza kudzora iyo mirau. Kana Iwe ukashandisa nzira dzekunyepedzera kana neimwe nzira kuyedza kudzora iyo mirau, kutumira kwako kunogona kubviswa pakukodzera pahungwaru chete hweHodges University.
mibayiro: Iye anokunda mumakwikwi achagamuchira imwe Hodges Hawk yekutamba yekutamba. Kana vakawanda vakapinda vakaendesa zita rimwe chete rekukunda, ipapo mumwe anokunda achasarudzwa netsaona. Mubairo haugone kuchinjika. Chero uye zvese zvine mubairo zvine chekuita nemari, kusanganisira pasina muganho chero neese federal, nyika, uye / kana yemunharaunda mitero, uchave wega mutoro weWinner. Hapana chinotsiva mubairo kana kuendesa / kupihwa mubairo kune vamwe kana kukumbira iyo yakaenzana nemari neWinner inobvumidzwa. Kugamuchirwa kwemubairo kunopa mvumo yeHodges University kushandisa zita raWinner, kufanana, uye kupinda nechinangwa chekushambadzira nekutengesa pasina imwezve muripo, kunze kwekunge zvakarambidzwa nemutemo. Hodges University, pakuziva kwayo kwese, inogona kupa inopfuura imwe Hodges Hawk plush toyi kune vanopinda.
Matambudziko: Mikana yekukunda inoenderana nenhamba yezvinyorwa zvinokodzera zvakagamuchirwa.
Winner Sarudzo uye Notification: Winner achasarudzwa neHodges University's Executive Council. Winner anozoziviswa neemail mukati memazuva maviri zvichitevera kusarudzwa kweWinner. Hodges University haizovi nemhosva yekutadza kwaWinner kugamuchira zviziviso nekuda kwespam, email isina basa kana mamwe marongero ekuchengetedza kana kupa kwaWinner kwemashoko ekutaurirana asiri echokwadi kana neimwe nzira. Kana Winner asingakwanise kusangana naye, haakodzere, anotadza kutora mubairo mukati memazuva manomwe ebhizinesi kubva panguva iyo mubairo chiziviso wakatumirwa, kana kukundikana kudzorera nenguva yakazadzikiswa uye yaitwa chiziviso uye kuburitswa sezvinodiwa, mubairo unogona kubvisirwa uye mumwe Winner yakasarudzwa. Kugashirwa naWinner wemubairo unopihwa mumakwikwi aya kunoenderana nekutevera kune chero uye yese federal, nyika, uye yemunharaunda mitemo nemirau. KUNYANYA KUKANGANISWA KWEMAZANO ANOTONGWA NEMAWINERI (KUHODGES UNIVERSITY'S SOLE DISCRETION) ZVINOGONESA KUSVIRA KWEMAWINERI SEMUKUNDI WEMAKWikwi, UYE ZVESE ZVESE ZVINOKUNDA ZVICHANGOPEREKEDZWA.
Kodzero Dzinopihwa Newe: Nekupinda mumakwikwi aya, Iwe unomiririra uye waranti kuti yako yekupinda ibasa repakutanga rekunyora, uye haityori chero yechitatu bato rekodzero kana yehungwaru kodzero dzepfuma. Kana yako yekupinda ikatyora pane yehungwaru chivakwa kodzero yeumwe, Iwe uchave usina kukodzera pane wega kungwara kweHodges University. Kana zvirimo zvekupinda kwako zvichinzi zvinokanganisa chero kodzero yepamutemo kana yehungwaru yechero munhu wechitatu, Iwe, nemari yako chete, chengetedza kana kugadzirisa kupokana nezvakadai. Unofanira kuregerera, kudzivirira, nekubata Hodges University isingakuvadzi kubva uye kupokana nechero sutu, kuenderera mberi, zvirevo, chikwereti, kurasikirwa, kukuvara, mutengo kana mari, iyo inogona kupinda neHodges University, kutambura, kana kunzi ibhadharwe nekuda kwekutyorwa uku kana kufungidzirwa kutyorwa kwekodzero yeumwe wechitatu.
Terms & Conditions: Hodges Yunivhesiti inochengetera kodzero, mukufunga kwayo kwese, kudzima, kugumisa, kugadzirisa kana kumisa kukwikwidza kunofanirwa kuita hutachiona, bhagi, kupindira-kusabvumirwa kwevanhu, hunyengeri, kana zvimwe zvikonzero kupfuura kutonga kweHodges University kunokanganisa kana kukanganisa hutongi, chengetedzo, kururamisira, kana kuita kwakakodzera kwemakwikwi. Mumamiriro ezvinhu akadaro, Hodges University inogona kusarudza Winner kubva kune ese akakodzera magwaro akagashirwa pamberi uye / kana mushure (kana zvakakodzera) danho rakatorwa neHodges University Hodges Yunivhesiti inochengetera kodzero, mukufunga kwayo kwega, kutadzisa chero munhu anokanganisa kana kuyedza kukanganisa maitiro ekupinda kana mashandiro emakwikwi kana webhusaiti kana anotyora aya maMitemo neMamiriro. Hodges University ine kodzero, mukufunga kwayo chete, kuchengetedza kuvimbika kwemakwikwi, kusabvisa mavhoti chero chikonzero, kusanganisira, asi kwete kuganhurirwa kune: akawanda akanyorwa kubva kumushandisi mumwechete kubva kwakasiyana IP kero; akawanda akanyorwa kubva kune imwechete komputa kupfuura izvo zvinotenderwa nemitemo yemakwikwi; kana kushandiswa kwemabhoti, macros, zvinyorwa, kana imwe nzira yehunyanzvi yekupinda. Chero kuyedza kweanopinda kuti akanganisa nemaune chero webhusaiti kana kukanganisa mashandiro ari pamutemo emakwikwi anogona kunge iri kutyora kwematsotsi nemitemo yevagari. Kana kuedza kwakadaro kukaitwa, Hodges University inowana kodzero yekutsvaga kukuvara kusvika pamwero wakazara unobvumidzwa nemutemo.
Chipingidzo Liability: Nekupinda, Unobvuma kusunungura uye kubata zvisina maturo Hodges University uye ayo anoverengeka, vanobatana, kushambadzira uye kusimudzira masangano, vanobatirana, vamiririri, vamiririri, vanomutevera, vanopa, vashandi, maofficial, uye vatungamiriri kubva kune chero chisungo, chirwere, kukuvara, kufa, kurasikirwa, kukwikwidza, kubvunza, kana kukuvara kunogona kuitika, zvakananga kana zvisina kunangana, kungave kunokonzerwa nekuregeredza kana kwete, kubva: (i) kutora mukana kwakadaro kumukwikwidzi uye / kana kugashira kwake, kutora, kushandisa, kana kushandisa zvisirizvo chero mubairo kana chero chikamu zvacho; (ii) kukundikana kwehunyanzvi kwerudzi rupi zvarwo, kusanganisira asi kwete kuganhurirwa nekusaita basa kwecomputer, tambo, network, Hardware, kana software, kana imwe michina yemagetsi; (iii) kusavapo kana kusasvikika kwechero kufambisa, runhare, kana Internet basa; (iv) kupindirwa kwevanhu kusingatenderwe mune chero chikamu chekupinda maitiro kana kukurudzira. (v) zvemagetsi kana kukanganisa kwevanhu mukutungamira kweKusimudzira kana kugadzirisa zvinyorwa.
Nharo: KUMASHURE MBERI ZVINOGONESESWA NEMITEMO yeUnited States NE [dunhu rako / dunhu], PASINA Kuremekedza KUKONZANA KWEZVIDZIDZO ZVEMutemo. Semamiriro ekupinda mumakwikwi aya, anotora chikamu anobvuma kuti chero gakava risinga gadziriswe pakati pemapato, uye zvikonzero zvekuita zvichibuda kana kubatana nemakwikwi aya, zvichagadziriswa mumwe nemumwe, pasina kuita chero nzira yekirasi yekuita , chete pamberi pedare riri mu [dunhu rako / dunhu] rine hutongi. Kupfuurirazve, mukukakavadzana kwakadai, hapana munhu anobvumidzwa kutora mibairo, uye izvi zvinoregedza kodzero dzese dzekukuvadza, kukuvadza, kana kukuvadza zvinokonzeresa, kusanganisira muripo wemagweta, kunze kwemubhadharo wemubatsiri. kureva mari inosanganisirwa nekupinda mumakwikwi aya). Mutori wechikamu anoregedzera kodzero dzose dzekukuvara kana kuwedzerwa.
Rwakakunda Rondedzero: Kuti uwane kopi yezita raWinner kana kopi yeiyi Mitemo Yepamutemo, tumira chikumbiro chako pamwe chete neyakaiswa chidhindo, yakazvinongedzera ku: Hodges University Marketing department, 4501 Colonial Blvd., Fort Myers, Fl 33966, USA. Zvikumbiro zvinofanirwa kugamuchirwa pasati papfuura Gumiguru 23, 2020.
Sponsor: Anotsigira mukwikwidzi ndiHodges University Marketing department, 2647 Professional Circle, Naples, FL 34119 USA.